Miyuu Sii Joogi Doonaa Kooxda Paris Saint-Germain Mise Wuu Ka Tagi Doonaa Neymar Jr? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Suurtogalnimada uu Neymar Jr xili ciyaareed kale ugu qaadan karo kooxdiisa Paris Saint-Germain ayaa dalka France laga dareemayaa in ay tahay wax aan jirin oo kale waxaana la ogaaday in agaasimaha PSG ee Leonardo uu haddaba sawiranyo liiska ciyaartoyda uu lacagta Neymar ku maal galin doono.
War maanta oo arbaca ah lagu daabacay wargayska dalka France ka soo baxa ee Le10sport ayaa lagu shaaciyay in PSG ay isku diyaaronayso bixitaanka Neymar isla markaana ay lacagtiisa maal galin ku samayn doonaan.
Sida warkan lagu sheegay kooxda PSG ayaa suuqa xagaaga ee dhamaadka xili ciyaareedkan ogolaan karta in Neymar Jr uu ku biiro kooxdii uu doonayay in uu ku laabto ee Barcelona ama haddii ay kooxo kale noqonayso si ay lacagtiisa xidigo kale oo muhiim ah ugula soo saxiixdaan.
Magacyada ciyaartoyda la soo qaaday ee ay PSG u adeegsan karto dhaqaalaha badan ee ay Neymar Jr ka heli karaan waxaa ku jira Philippe Coutinho oo ay wali mulkiyadiisa leedahay Barcelona oo ah kooxda hogaaminaysa tartanka Neymar loogu jiro.
Arintan ayaa Barcelona ka caawin karta in ay lacagta badan ee Neymar Jr qayb ahaan u bixin karaan adeega Philippe Coutinho kaas oo la filayo in uu ka soo laabto amaahda uu ku joogo Bayern Munich.
Ciyaartoyda kale ee la soo qaaday magacooda ee ay PSG u adeegsan karto lacagta ay ku iibiso Neymar JR waxaa ku jira Paulo Dybala oo Juventus ka tirsan, difaaca Napoli ee Koulibaly iyo xidiga khadka dhexe ee N’Golo Kante oo ay PSG waqti dheer doonaysay.
Sida lagu shaaciyay Le10sport, waxay maamulka PSG haddaba sii sawiranayaan ciyaartoyda ay suuqa xagaaga la soo saxiixan karaan iyada oo lacagta Neymar noqon karta mid maal galin wayn kooxda loogu samayn karo.
Laakiin Neymar Jr ayaan ahayn xidiga kaliya ee la filayo in uu PSG ka baxo, waxaa sidoo kale bixitaankooda laga hadlayaa Thiago Silva iyo Kurzawa.
Haddii ay PSG ka hadho Champions League, waxaa la ogaaday in Barcelona ay isla todobaadka soo socda wada hadal la furi doonto Neymar Jr si uu Camp Nou ugu soo laabto.